सुदुरविरुद्ध पुलिसको सहज जित | Hamro Khelkud
दुवईमा सम्पन्न बिच एयर ब्याडमिन्टनमा नेपाली समुदाय दोस्रो
युरो २०२० : अन्तिम १६ मा पुग्न कसलाई के आवश्यक?
चेल्सीका डिफेन्डर मिलानमा अनुबन्धित
डिपाए बार्सिलोनामा अनुबन्धित
पोल्यान्डविरुद्ध पनि स्पेनको बराबरी
पोर्चुगलमाथि जर्मनीको सानदार जित
सुदुरविरुद्ध पुलिसको सहज जित
बुधबार, जेठ १०, २०७४
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – बलिङतर्फ सुशिल कँडेल तथा ब्याटिङमा अमित श्रेष्ठले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि युवा खेलाडीले भरिपूर्ण विभागीय क्लब नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा पुलिसले सुदुरपश्चिमाञ्चलमाथि ७ विकेटको सहज जित निकालेको हो ।
टस जितेर फिल्डीङ रोजेको पुलिसका लागि युवा बलर सुशिल कँडेल एक्लैले ५ विकेट लिएपछि सुदुर ८ बल बाँकी छदा १ सय ७० रनमा अलआउट भयो । ३८ रनको स्थितिमा ३ विकेट गुमाएको सुदूरलाई चौथो विकेटका लागि भएको ज्ञानेन्द्र कुँवर र भिम सार्कीको ६९ रनको साझेदारीले उकासेको थियो। कुँवरले आफ्नो टोलीका लागि सर्वाधिक ४९ रन बनाए भने भीम सार्कीले २८ रन जोडे। कुशल भुर्तेलको शानदार रनआउटले साझेदारी टुटेसँगै सुदुरको विकेट पतन सुरु भएको थियो। सन्तोष भट्टले २५ तथा रोशन नेपालीले २१ रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक छुन सकेनन् । सुदुरलाई कम स्कोरमा रोक्न पुलिका सुशिल कँडेलले १० ओभरमा जम्मा २१ रन खर्चदै २ मेडनसहित ५ विकेट लिए। ललित सिह भण्डारीले ३ तथा आरीफ शेखले १ विकेट लिए।
सुदुरले दिएको १ सय ७१ रनको लक्ष्य पुलिसले २४.३ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । ओपनर शंकर रानालाई शुन्य रनमा गुमाएपनि पुलिसका लागि अमित श्रेष्ठले ६३ बल खेल्दै ८ चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ७५ रन बनाए । अमितले दीलिप नाथसँग दोस्रो विकेटका लागि १ सय २८ रनको साझेदारी गरे । दीलिपले ५० बलमा ४० रन बनाए । दीपेन्द्र सिंह ऐरी २७ तथा आरिफ शेख ८ रनमा नटआउट रहे । १९ बल खेलेका ऐरीले ६ चौका प्रहार गरे । सुदूरपश्चिमका सागर भण्डारी, विकास अग्री र भीम शार्कीले एक–एक विकेट लिए । जितपछि समूह बीमा पुलिस २ अंक जोड्दै समुहमा दोस्रो स्थानमा छ ।
जारी प्रतियोगिताको एकै खेलमा ५ विकेट लिने सुशिल दोस्रो खेलाडी बने । यसअघि मंगलबार भएको पहिलो खेलमा आर्मीका सागर पुनले पूर्वाञ्चल विरुद्धको खेलमा ५ विकेट लिएका थिए ।
प्रतियोगितामा तीन विभागीयसहित सहभागी आठ टिमको सहभागिता रहेको छ । समूह ‘ए’ मा नेपाल एपिएफ क्लब, मध्यमाञ्चल बिकास श्रेत्र, मध्यपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र र पश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र रहेका छन् यस्तै समूह ‘बी’ मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, पूर्वाञ्चल बिकास क्षेत्र र सुदुरपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र रहेका छन् । प्रतियोगिताको विजेताले २० लाख तथा उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । त्यस्तै सेमिफाइनलमा पुग्ने टोलीले ५० हजार र प्रत्येक लिग खेलमा जित्ने टोलीले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको म्यान अफ दी सिरिजले एक लाख रुपैया र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान ५०–५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहिबार समूह बी पूर्वाञ्चल र पुलिसबीच खेल हुनेछ ।
आइतबार, असार ६, २०७८
आधुनिक फुटबल भनेको आक्रमक फुटबल नै हो !
प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई शंकाको लाभ दिनुपर्छ
एनएसएलको सफलतासँगै निरन्तरतामा प्रश्न
भारतलाई सम्हाल्दै कोहली र रहाणे
पोर्चुगलविरुद्ध जर्मनीलाई अग्रता
पुलिसले ३ खेलाडी प्रशिक्षणमा नपठाउने
फ्रान्स हंगेरीसँग हारबाट जोगियो
अम्पायरको निर्णयमा रुष्ट सकिबले जब स्टम्प टिपेर फ्याँके
शुक्रबार, जेठ २८, २०७८
प्रशिक्षण गर्न गौरिका बेलायतबाट नेपालमा
आइतबार, चैत १, २०७७
एउटै क्लबबाट फुटबल खेल्दै तीन दाजुभाई
शनिबार, फागुन १५, २०७७
फाइनलअघि यसो भन्छन् कप्तानद्वय विनोद र शरद
शुक्रबार, माघ १६, २०७७
Nepal vs Chinese Taipei : Watch Live Streaming June 3, 2021
Indian Coach Law banned foraseason May 26, 2021
Almutairi needs time unlike Aussems’ premature end May 21, 2021
Nepal vs Iraq : Live Streaming May 19, 2021
Six new faces in Nepal squad for World Cup qualifiers May 19, 2021